Oge opupu ihe ọcha na Email Marketing Mmemme | Martech Zone
Oge na-ekpocha Mmemme Email ahụ
Monday, April 16, 2012 Wednesday, April 11, 2012 Vlọ Lavon
Ọ bụ oge ahụ n’afọ. Arebọchị dị ogologo ma ihu igwe dị mma. Ndị mmadụ na-ejikarị oge opupu ihe ubi eme ihe iji nwee ike ihicha ụlọ ha site na elu ruo na ala. Amaara m na emeelarị m ezigbo mmiri nke ụlọ obibi m. Ọ bụghị echiche ọjọọ ịtụgharị ịdị ọcha na mmemme ahịa email gị. Ndị a bụ ụfọdụ ndụmọdụ ntinye mmiri mmiri:
Ichapu! Wepụta oge na-asachapụta ndepụta gị nke ọma. Chọpụta onye anaghịzi etinye aka na nzipu ozi gị. Agaghị m adụ ọdụ ka ihichapụ ha, mana ikekwe ịkwaga ha gaa na nke ha nke ị nwere ike ịtọlite ​​na mgbasa ozi ọzọ. Nke a na-enye ume ọhụrụ ndepụta email gị ma jide n'aka na ị na-ezigara ndị debanyere aha gị chọrọ ịnata ozi ịntanetị gị.
Ndụ Ọhụrụ. Ana m ahụ n'anya n'oge opupu ihe ubi mgbe okooko osisi malitere ịmalite ọzọ - ọ na-adị mma mgbe niile! Enwere ike ikwu otu ihe ahụ maka mkpọsa email gị? Ọ bụrụ na ọ bụghị, were ụfọdụ ume ume gị imewe. Ọbụna ma ọ bụrụ na ha mara mma, ọ bụrụ na ị na-eji otu ụdị ahụ maka otu afọ - ọ nwere ike ịbụ oge ịnwale ọdịdị ọhụrụ. Mepụta masterpiece, yabụ mgbe ndị debanyere aha natara ozi gị, ọ na-eju ha anya na ọmarịcha ozi ịntanetị gị bụ!
Polish. Nhicha oge opupu ihe ubi bu ohere iji lee metrik gi. Dịka adreesị email, ejiri m n'aka na ị na-eme nke a ugbu a, mana n'ezie lee ha anya. Nyochaa iji hụ ụdị ọdịnaya ndị debanyere aha gị kacha nabata. I nwere ike gbalịa ilekwasị anya na nke a wee mepụta ozi ịntanetị abụọ iji hụ ma ị ga-enweta otu nzaghachi ma ọ bụ ka mma!
Gbalịa Ihe Ọhụrụ. M na-ejikarị oge nhichapụ oge opupu ihe ubi m eme ihe dị ka ohere iji hazie oghere dị n'ụlọ m - ịnwale nhazi ọhụrụ iji hụ ụdị ntọala kachasị amasị m. Eleghi anya oge eruola ka ị nwaa ihe ọhụrụ na mmemme ahịa email gị? Dabere na Merkle's "View From the Digital Inbox" na 2011, "55% nke ndị nwere ekwentị eji ekwentị na-eji ya elele akaụntụ email ha." Ikekwe ị banyela n'ọgba aghara site na mkpọsa email gị. Anọla ebe ahụ! Gbalịa ilekwasị anya na ekwentị ma ọ bụrụ na nke ahụ bụ ebe ndị na-ege gị ntị nọ ma ọ bụ ederede ịdenye aha? Ihe ọ bụla iji nye mgbasa ozi email gị ntakịrị oomph na oge ọhụrụ!
Chọrọ enyemaka mmiri na-ehichapụ ozi ịntanetị ndị ahụ? Gakwuru ndị na - ahụ maka ịre ahịa email na Delivra. Anyị nwere obi ụtọ ibinye aka na-ehicha mmiri!
Tags: nhichacontent Marketingemail Marketinganatarankewadebanyere aha
Lavon Temple bụ Digital Media Specialist na BLASTmedia, ịmepụta atụmatụ nkwukọrịta maka ndị ahịa azụmaahịa na-akọwapụta ebumnuche, atụmatụ, na usoro.
Gbasaa Ule Ad Design Ideas
Atụmatụ, imewe, na imchọcha weebụsaịtị
Nke a bụ oge dị mma iji hichaa listi email gị ma nwekwaa ihe kpatara ịme nke a na ndị na-enye ọrụ email na-enyocha ihe ha kpebiri na ọ ga-abụ ozi "enweghị mmasị" Ihicha ochie gị adreesị email na ndị na-abụghị ndị na-aza ga-enyere gị email atụmatụ tremendously! Lelee edemede a maka nkọwa ndị ọzọ gbasara amụma ọhụrụ http://spotright.com/digital-marketing/spotiq-segment-now/